Pirof. Asaffaa Jaal'ataa: 'Ummatni Oromoo hir'ina jaarmiyaa hawaasaafi siyaasaa qaba' - BBC News Afaan Oromoo
Barbaachisummaa Jaarmiyaalee hawaasaa cimsuu mataduree jedhurratti haasaa kan godhan Pirof. Asaffaa Jaallataa, Uummatni Oromoo jaarmiyaa hawaasaa cimaa dhabuusaaf rakkooleen alaa fi keessoo sababa ta'us himan.
Rakkoo kana keesaaa cabsanii bahuuf jaarmiyaa cimaa ijaaruun barbaachisa kan jedhan uummatni jaarmiyaa cimaa hin qabne rakkoosaa hiikkachuu hin danda'u jedhan.
Dabalanis Warraaqsi Qeerroofi Qarree bu'aa qabsoo ganna 50ti. Jaarmiyaa akka haaraatti dhiyeenya kana dhalate miti jedhan.
Haa tahu malee, Erga warraaqsi kun socho'ee milkaa'e booda, namoota siyaasaatti kennee bakkaan otoo hin gahin deebihe.
Qabsoo uummata Oromoo keesaatti, inni tokko moo'ee inni tokko mo'amaa tahuu hin qabu. Hundumtuu harka walqabatee moo'uu qaba- jaarmiyaa tokko jalatti.
Hundeesitoota OSA keessaa tokko kan ta'an fi hayyuun seenaa proofeesar Mahaammad Hassan mata duree 'The road traversed by the Oromoo Studies Association since 1986' yookiin Afaan Oromootiin 'Erga bara 1986tii daandii Waldaan Qorannoo Oromoo Qaxxaamuree dhufe' jedhu irratti haasaa taasisan.
Dr Mahaammad yeroo ammaatti miseensa boordii OSA ta'uunis hojjechaa jiru. OSAn yeroo hundeefamasaa bara 1986 irraa eegalee yaa'iiwwan idil addunyaa ardiilee garaagaraatti taasifaman irratti beekumsa waa'ee Oromoo gama babal'isuutin gahee guddaa bahate jedhan.
Oromoo fi miti- Oromoon eenyummaa isaanin osoo hin daangeffamin miseensa OSA ta'aniiru kan jedhan proofeesar Mahaammad Hassan yeroo ammaatti lammiileen biyyaalee garaagaraa miseensummaan hirmaachaa jiraachuu himan.
Haa ta'u malee OSAn waldhabdee keessoo isa mudattaa akka ture fi waldhabdee jiru cinatti gochuun walin hojjechaa akka turan himan.
OSAn hanga ammaatti preezidaantota 22 filachuu isaas milkaa'ina isaaf galtee ta'uu himan.
OSAn gara biyyatti deebi'uun isaas hirmaannaa hayyuulee biyya keessa jiranif carraa kan kennu akka ta'e dubbatan.
Yaa'ii OSA: Waa'ee ijoollee Oromoo garbummaatti gurguramanii, Itoophiyaa hanga Afriikaa Kibbaa